Ladoany chllayo | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | America, Toerana fitsangatsanganana, Peru
Any amin'ny departemantan'i Lambayeque no ahitantsika ny tanànan'i Chiclayo, faritra amorontsiraka tsara tarehy any amin'ny faritra avaratry ny firenena Peroviana, tadiavina sy tadiavina ho an'ny morontsiraka mahafinaritra miaraka amin'ny toetrandro mahafinaritra mandritra ny taona. Ny zavatra tsara momba an'i Chiclayo dia ankoatry ny fananana izany tontolo amorontsiraka mahafinaritra izany, dia manana fomban-drazana manokana ihany koa izay mahatonga azy io ho toerana tsy hay hadinoina nandritra ny dia nataonay.
Ankoatr'izay, andeha hotadidintsika fa tsy mihoatra ny kely noho ny "Capital of Friendship", anarana voarain'ny hatsaram-pon'ireo mponina ao aminy.
Ny ankamaroan'ny fomba amam-panao any Chiclayo dia mifandray amin'ny tantarany sy ny fivavahany, Noho izany, ny fiangonana sy kianja nanan-kery nanan-kery nanomboka ny taonjato faha-XNUMX dia nanjary zava-dehibe amin'ny mponina ao aminy. Noho izany, ny Katedraly Chiclayo dia miavaka amin'izany toerana izany hijerena sy hankasitrahana tantara kely tamin'ny taonjato roa farany tao an-tanàna.
Raha mitady karazana fomba amam-panao hafa, izay misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny zavakanto, andao hojerentsika ny fisian'ny soavaly pasoa sy kalesy, ireto farany no mpitaingina soavaly paso mampiseho ny fomba tsara tarehy.
Any Chiclayo, malaza ihany koa ny fiadiana akoho., raisina ho toy ny fomba fialamboly efa nisy hatry ny ela. Ny gastronomy ao amin'ilay faritra dia azo antsoina hoe ampahany manan-danja amin'ny hatsarany nentim-paharazana.
Aorian'ity fampidirana ity, raha mieritreritra ny handeha ho any Chiclayo ianao amin'ny fialan-tsasatrao na liana tsotra fotsiny amin'ilay toerana ianao dia vakio hatrany mba hahalalanao azy bebe kokoa.
2 Fahafantarana sy fanajana ny tantarany
3 Antoko sy fankalazana
3.1 Mpivahiny sy ny hazofijalian'i Chalpon
3.2 Ny lakroa masina an'ny fivahinianana motupe
I Chiclayo no tanàna fahefatra lehibe indrindra any Peroa, renivohitry ny faritra Lambayeque izay eo amin'ny lemaka amoron-tsiraka avaratry Peru. Tamin'ny 2007 ny isan'ny mponina dia 524.442 mponina, nefa izany dia mitombo isan-taona. Manana toetrandro mafana sy mafana be izy ireo, miaraka amin'ny fitsipiky ny ranomasina madio mahafinaritra izay mandrakotra ny jeografia iray manontolo izay misy tendrombohitra lehibe sy morontsiraka midadasika misy onja mahatalanjona. Izy io dia tanin'ny sivilizasiôna angano taloha ary fiarahamonina mpanjanaka manan-karena izay hita taratra amin'ireo tranobe nentim-paharazana goavambe. Ny tanànan'i Chiclayo dia fantatry ny maritrano kolonialy kanto, zava-mahadomelina hazan-dranomasina lehibe, fanafody voajanahary ary malaza ihany koa izy noho ireo toerana arkeolojika manaitra sy rava izay mahaliana ny mpizahatany.
Fahafantarana sy fanajana ny tantarany
Chiclayo dia natsangana tamin'ny taona 1560 ho tanàna ambanivohitra any India ny pretra espaniola. Hatramin'ny taonjato faha-600 dia tanàna kely izy io raha ampitahaina amin'ny tanànan'ny Lambayeque akaiky. Nanomboka tamin'izay, ny tanànan'i Chiclayo dia nitombo be dia be lasa tanàna lehibe maoderina. Ny faritra Lambayeque any Peru, izay misy an'i Chiclayo amoron-tsiraka, dia niteraka ny kolontsaina Mochica lehibe nanomboka tamin'ny taona XNUMX AD
Ny angano dia milaza fa ny andriamanitra Naylamp dia niara-dia an-tsambo niaraka tamin'ny olona marobe an'arivony taona maro lasa izay mba hahita ny fanjakany. Ny sivilizasiôna taloha sasany dia nahita ny paikadin'ny fifehezana ny faritra, satria toerana manan-danja ao Però izy io. Misy ivon-toerana ara-barotra any avaratry Pérou izay alehan'ny tsirairay satria tena zava-dehibe izany.
Any Chiclayo, toy ny any amin'ny faritra sisa tavela ao Però, ireo mponina ao aminy dia manana fankasitrahana sy fanajana lehibe ny tantarany. Miharihary izany amin'ny fankalazana kolontsaina iraisana manerana ny firenena. Any Chiclayo, ohatra, ankalazaina ny "Herinandron'ny Identity", dia fety fanao isan-taona izay ankalazana mandritra ny herinandro. Ity herinandro ity dia misy hetsika samihafa toy ny fifaninanana hatsaran-tarehy ho an'ny titre Miss Lambayeque; fampisehoana any an-tsekoly momba ny asan'ny mpianatra, fampirantiana sary an'ny faritra, sns. Ny loka izay omena amin'ny fampisehoana tsara indrindra an'ny sekoly ary koa ho an'ny sary tsara indrindra. Ny daty no manapaka ny daty.
Antoko sy fankalazana
Misy fankalazana malaza any an-tanànan'i Peroa ary ao amin'ny faritra Chiclayo dia tsy misy ankanavaka amin'izany. Hetsika manan-danja sasany hanatrehana anao raha te-ho any Chiclayo ianao dia ireto manaraka ireto:
Mpivahiny sy ny hazofijalian'i Chalpon
Fetin'ny Santísima Cruz de Chalpón io amin'ny volana febroary: (raisina ho fahavaratra amin'ny hemisphere atsimo), ankalazaina ao an-tanànan'i Chiclayo, dia mahafinaritra hatrany ho an'ny besinimaro izany.
Ny lakroa masina an'ny fivahinianana motupe
Atao isan-taona izy io amin'ny voalohan'ny volana aogositra any amin'ireo tanànan'ny akaikin'i Chalpón sy Motupe. Ny hetsika dia misy fivahiniana masina (Santísima Cruz de Motupe) ho fanomezam-boninahitra ny olo-masina mpiaro ny tanàna, ary nanomboka tamin'izay dia nanjary fankalazana ara-pivavahana lehibe indrindra ao amin'ny faritry Lambayeque.
Ny fankalazana dia atao mandritra ny andro maromaro. Ny 2 aogositra, ny pretra paroasy sy vondron'olona mpanaraka mahatoky dia manomboka ny fivahinianana masina any amin'ny Cerro de Chalpón, izay manodidina ny 10 km miala eo. Ny ampitson'iny, ny mpivahiny dia miakatra amin'ny havoana mankamin'ny lava-bato izay misy ny hazo fijaliana masina ary rehefa tonga izy ireo dia mankalaza lamesa. Avy eo izy ireo dia hitondra ny hazo fijaliana miakatra amin'ny havoana ary hiverina tsikelikely any am-piangonana ao Motupe izy ireo, ary amin'ny 4 Aogositra dia hamakivaky ireo tanàna kelin'i El Salitral, El Zapote ary Guayaquil. Tsy isalasalana fa fomban-drazana sy fomba amam-panao tsapan'ny mponina maro izany ary manolo-tena ho azy ireo izy.
Ny andro lehibe amin'ny festival dia ny 5 Aogositra, izay anaovan'izy ireo lapa misy afomanga ao amin'ny kianja lehibe ary mitendry mozika mandra-pahamarain'ny andro ny tarika. Ny fivahinianana masina dia manolotra fotoana lehibe hijerena ny fifangaroan'ny fomba amam-panao vazimba sy Kristiana tafiditra ao anatin'ny fombafomba ara-pivavahana eo an-toerana.
Tsy isalasalana fa toerana tsy azonao hadinoina i Chiclayo raha handeha hitsidika an'i Peroa ianao. Ho tianao ny fomban-drazany, ny mponina ao aminy, ny gastronomie-ny, ny endriny mahafinaritra, izay rehetra ananany hitanao amin'ny toerana hitsidihana anao sy ny arkeolojia ... tsy azonao hadino izany! Mazava ho azy, aza adino ny fakantsary satria te-hanao tsy mety maty ny fotoana tsirairay afaka hiainanao amin'ity tanàna mahafinaritra ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Ladoany chllayo
Yuri castro dia hoy izy:
Mametaka sary marina, ny voalohany dia mifanitsy amin'ny Katedraly Trujillo fa tsy i Chiclayo. Toy izany koa, ny fahefatra dia tsy mifanaraka amin'ny arabe chiclayo.
Zahao tsara ny sarinao alohan'ny hametrahana azy ireo mba tsy hampisafotofoto ny mpamaky
Valiny tamin'i Yuri Castro
Hitsidika an'ireny tanàna matoatoa ireny ve ianao?
Zavatra ilaina hita any Porto